Shanghai Metro increases frequency of cleaning, isinfection in carriages(1/9)
2020-02-16 08:35:38 Xinhua Editor :Mo Hong'e
Staff member Feng Gangfeng of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects the floor in a carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff member Feng Gangfeng of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects handrails in a carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff member Jiang Jun of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects a carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff member Feng Gangfeng of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects a carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff member Feng Gangfeng of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects seats in a carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff members of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. leave after disinfecting the carriages of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 14, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)
Staff member Jiang Jun of Shanghai Metro Property Management Co., Ltd. disinfects the carriage of Shanghai Metro in Shanghai, east China, Feb. 13, 2020. Shanghai Metro has increased the frequency of cleaning and disinfection in its carriages to create a clean environment for passengers during the fight against the novel coronavirus epidemic. (Xinhua/Ding Ting)